Careers - CHID
CHID Bank is the name ofacollection of individuals who believe in excellence. We specialize in hiring people who have the drive to succeed and the will to implement the discipline required to succeed. We focus on nurturing our team and providing our team an environment that is conductive to creative thought. We focus on eliminating stress and pressure so our team can think clearly and creatively.
What does CHID Bank do?
When you work at CHID Bank, you get to be part ofateam that is known for its performance. We are efficiency driven professionals who focus on the endgame.
What housing do you specialize in?
CHID Bank focuses not just on recruiting individuals that are performance oriented but also on developing them. To us it is important to ensure that our clients are satisfied and are being served with the care and respect they deserve.
ဆောက်လုပ်ရေး၊အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့တွင် ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၎င်းဘဏ်ခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးများအလိုက် အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသူများအား လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ | ကျား/မ Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
လက်ထောက်မန်နေဂျာ (ဒုတိယဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ) | ကျား/မ Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
ကြီးကြပ်ရေးမှူး | ကျား/မ Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး | ကျား/မ Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
အကြီးတန်းဘဏ်လက်ထောက် | ကျား/မ(၃)ဦး Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
အငယ်တန်းဘဏ်လက်ထောက် | (ကျား/မ) Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
ရုံးအကူ | ကျား(၁)ဦး Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
ယာဉ်မောင်း | ကျား(၁)ဦး Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
လုံခြုံရေး | ကျား(၃)ဦး Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
သန့်ရှင်းရေး | မ(၁)ဦး Bago, Myanmar Banking April 10, 2019
Contact us at the CHDB BANK office nearest to you or submitabusiness inquiry online.